🥇 ▷ Nokia 4.2 waxaa laga heli karaa Mexico: faahfaahinta iyo qiimaha ✅
Nokia 4.2 waxaa laga heli karaa Mexico: faahfaahinta iyo qiimaha
Shirkadda ayaa bishii la soo dhaafay HMD GlobaWuxuu ku dhawaaqay ku darista qalabkiisa cusub ee deeqda inta u dhexeysa bartamaha-dhexe; waxaan ka hadlaynaa kuwa cusub Nokia 4.2, kaas oo la yimid naqshad xarrago leh iyo astaamo cajiib ah, oo ka hoos shaqeeya nooca cusub ee Android.
Dhinaca dibedda waxaan ku aragnaa naqshad qurxoon oo ku jirta muraayad la sawiray iyo shaashad leh istiraatiijiyad gees ka-gees ah oo ah 5.71 inji oo leh xallin wanaagsan 720 x 1520 pixels.
Awooddeeda gudaha ayaa timid iyadoo leh sideed-processor processor, Snapdragon 439, kaas oo sidoo kale ka caawiya RAM oo ah 3 GB iyo xusuusta gudaha ah oo ah 32 GB, oo lagu daro microSD kaararka afyare illaa 400 GB.
Kaamiradiisu waa Dual leh 13 iyo 2 MP, oo leh Flash flash iyo cajalado fiidiyoow ah 10890p; halka camera selfie hore uu yahay 8 MP leh HD video. Qaybtan waxaan ku haynaa ikhtiyaarro waaweyn sida sirdoonka macmal, codsi kaamirooyin horumarsan oo Nokia 4.2 ah oo lagu maamuli karo farshaxankaaga gudaha oo ay ugu mahadsan tahay qaabkeeda bokeh iyo HDR.
Nokia 4.2 casaan Mexico
Waa Android 9, laakiin leh nooca Android One, oo lahaan doona casriyeynti ugu dambeysay ee Android iyo khibradaha ugu wanaagsan ee softiweer, intaas waxaa dheer, waxay la yimaadaan seddex sano oo xiriir ah bilkasta amniga iyo laba cusbooneysiinta Nidaamka Howlgalka.
Nokia 4.2 midab midab leh oo midab leh oo casri ah
Nokia 4.2 madow oo Mexico ah
Nokia 4.2 waxay timid Mexico midab casaan iyo madow, waana la heli karaa Telcel, Movistar iyo sidoo kale dukaamada kale ee tafaariiqda ah ee qiimaha ah $ 4,499 pesos.
Eeg faahfaahinta buuxa ee Nokia 4.2